About Us - Changzhou anoshuvira Motor Co., Ltd
Chemasanganiswa and Motor
Closed LOOP and Motor
BLDC motokari mutyairi
Closed loop injini mutyairi
and motokari mutyairi
Chemasanganiswa GEARBOX Motor
Planetary Gearbox and Motor
Akaputsa chemasanganiswa and Motor
nema17 akamedura injini
nema23 akamedura injini
LINER and Motor
Changzhou anoshuvira Motor Co., Ltd yakatangwa mugore ra2000, sezvinoita nyanzvi gwenya mugadziri muna Changzhou guta, China. Production vanokwanisa kwazvo zvinopfuura mamiriyoni 0,6 Motors pagore. Our Company anopa matatu makuru munhevedzano mishonga: Mbeu dzakauchikwa and Motors, DC brushless Motors uye injini mutyairi.
The long chigadzirwa mutsetse takadzitengeserwa chikuru kugadzira Makambani kuti Industry kuti kushandisa michina, zvokurapa uye zvoutano midziyo, aidhinda michina, kurongedza mano, Information Technology, mhuri mudziyo zvigadzirwa, uye kupomba midziyo.
Tine Engineering chikwata vane makore akawanda ruzivo fomu Engineering, magadzirirwo Engineering pamwe azvino kufambira mberi equipment.Our Engineering Staff anotipa wakanakisisa yepamusoro chigadzirwa basa mushure chigadzirwa runopiwa Customers edu. Changzhou anoshuvira Motor Co., Ltd vakawana kwayo ISO9001: 2000 advertising uye akawanda zvinhu zvedu tiri CE vanotenderwa.
Our Company inoomerera pamisimboti "kupa mitema zvigadzirwa" uye vose mishonga yedu RoHS aiteerera. Sezvo munyika nokutengesa, Changzhou anoshuvira Motor Co., Ltd kunyatsochengeta anotevera nhungamiro pamusoro International Commercial Rules Zvinosvibisa. Tava kukwanisa mukurumbira wedu pamwe Customers dzedu mumakore. Vavariro yedu ndeyokuti "Kuhwina musika tiine unhu uye basa" rinova izwi zvinowanzovapo ose Changzhou anoshuva Motor chikwata nhengo.
Kushanda pamwe chete, kukura pamwechete!